Fanokafana ny Jobily faha-150 taona – FJKM Ambavahadimitafo Fanokafana ny Jobily faha-150 taona |
Fanokafana ny Jobily faha-150 taona
A la une.Fankalazana.Jobily 150 taona.Vaovaom-piangonana
Publié le 14 mai 2012 à 07:05
Amin’ny alahady 20 mai 2012 no hanokafana ny fankalazana ny Jobily faha-150 taonan’ny FJKM Ambavahadimitafo. Ny teny faneva noraisina dia ny ao amin’ny Salamo 90, 17 :
« Ary aoka ho aminay ny fahasoavan’ny Tompo Andriamanitray;
Ary ampitoero aminay ny asan’ny tànanay;
Eny, ny asan’ny tànanay, ampitoero izy. »
Koa manasa ny rehetra ho tonga maro hiara-hidera an’Andriamanitra noho izany fotoana manokana izany.
Ho aminao anie ny Tompo